3,690 / 51,851 Strings (7 %)
Filter ↓ • Sort ↓ • All (51,851) • Untranslated (47,979) • Waiting (93) • Fuzzy (107) • Warnings (29)
G	Short for green in RGB စိမ်း	 Details
There isanew version of %1$s available. <a href="%2$s" %3$s>View version %4$s details</a>. <em>Automatic update is unavailable for this plugin.</em>	 %1$s ဗားရှင်း အသစ် ရနိုင်ပါြပီ။ <a href="%2$s" class="thickbox" title="%1$s">ဗားရှင်း %3$s အေသးစိတ်ကို ြကည့်ပါ</a>။ <em>ဒီအခင်းအကျင်းကို အလိုလို အဆင့်ြမှင့်တင်၍ မရပါ။</em>	 Details
There isanew version of %1$s available. <a href="%2$s" %3$s>View version %4$s details</a> or <a href="%5$s" %6$s>update now</a>.	 %1$s　ဗားရှင်း　အသစ်ရနိုင်ပါပြီ။ <a href="%2$s" class="thickbox" title="%3$s">ဗားရှင်း　%4$s အသေးစိတ်များကို　ကြည့်ပါ</a> သို့မဟုတ် <a href="%5$s">ယခုပင်　အသစ်ဖြည့်စွက်လိုက်ပါ</a>။ Details
There isanew version of %1$s available. <a href="%2$s" %3$s>View version %4$s details</a>.	 %1$s ဗားရှင်း အသစ် ရနိုင်ပါြပီ။ <a href="%2$s" class="thickbox" title="%1$s">ဗားရှင်း %3$s အေသးစိတ်ကို ြကည့်ပါ</a>။	 Details
You can now manage and live-preview Custom Header in the <a href="%s">Customizer</a>.	 ယခုအခါ <a href="%1$s">စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်စနစ်</a> တွင် စိတ်ကြိုက် နဖူးစီး ပြောင်းလဲမှုအား တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု၍ စီမံနိုင်ပါပြီ။	 Details
You can now manage and live-preview Custom Backgrounds in the <a href="%s">Customizer</a>.	 ယခုအခါ <a href="%1$s">စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်စနစ်</a> တွင် စိတ်ကြိုက် နောက်ခံ ပြောင်းလဲမှုအား တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု၍ စီမံနိုင်ပါပြီ။	 Details
Your theme supports one menu. Select which menu you would like to use.	 သင့် အခင်းအကျင်းမှ မီနူး %s ခုကို ေထာက်ပံ့ထားပါသည် သင်အသံုးြပုလိုသည့် မီနူးကို ေရွးပါ။	 Details
သင့် အခင်းအကျင်းမှ မီနူး %s ခုကို ေထာက်ပံ့ထားပါသည် သင်အသံုးြပုလိုသည့် မီနူးကို ေရွးပါ။
2015-08-24 07:15:03 GMT
You are using the multi-file uploader. Problems? Try the <a href="%1$s" %2$s>browser uploader</a> instead.	 ဖိုင်အများအပြား တစ်ပြိုင်တည်း ပို့တင်စနစ်ကို သင်အသုံးပြုနေသည်။ ပြဿနာရှိပါသလား။ <a href="%1$s" target="%2$s">ဘရောက်ဇာ၏ ပို့တင်စနစ်</a>ကို အစားထိုးသုံးကြည့်ပါ။	 Details
Sorry, you have used your space allocation of %s. Please delete some files to upload more files.	 သင့်အတွက် သတ်မှတ်ေပးထားေသာ ေနရာလွတ်အားလံုးကို သင် အသံုးြပုလိုက်ြပီြဖစ်သည်။ ေနာက်ထပ် ဖိုင်များ တင်နိုင်ရန် ဖိုင်အချို့ကို ဖျက်ပါ။	 Details
For most themes, the header text is your Site Title and Tagline, as defined in the <a href="%s">General Settings</a> section.	 အခင်းအကျင်း အများစုအတွက် ခေါင်းစီးစာသားဆိုသည်မှာ <a href="%1$s">အထွထေွေ</a> သတ်မှတ်ချက်များ အပိုင်း တွင် သတ်မှတ်ပေးထားသော သင့်ဆိုဒ် ခေါင်းစဉ်နှင့် လက်စွဲစကားဖြစ်သည်။	 Details
You have been added to this site. Please visit the <a href="%1$s">homepage</a> or <a href="%2$s">log in</a> using your username and password.	 သင့်ကို ဒီဆိုဒ်သို့ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ <a href="%s">အဖွင့်စာမျက်နှာ</a> သို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါ သို့မဟုတ် သင့်သုံးသူအမည်နှင့် စကားဝှက်ကို သုံး၍ <a href="%s">ဝင်ပါ</a> Details
It looks like you're using an old version of %s. For the best WordPress experience, please update your browser.	 <a href='%s'>%s</a> ဗားရှင်း အဟောင်းကို သင်အသုံးပြုနေသည်ဟု ယူဆရသည်။ အကောင်းဆုံး WordPress အတွေ့အကြုံများရရှိနိုင်ရန် သင့်ဘရောက်ဇာကို အဆင့်မြှင့်ပါ။	 Details